कारको नम्बर प्लेटकै मूल्य २६४ करोड, न सुनको, न चाँदीको, के होलान् त विशेषता ? - Everest Dainik - News from Nepal
कारको नम्बर प्लेटकै मूल्य २६४ करोड, न सुनको, न चाँदीको, के होलान् त विशेषता ?
एउटा कारको नंबर प्लेटकै मूल्य २६४ करोड रुपैयाँ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर समाचार भने सत्य हो। ब्रिटेनमा अनलाइन बिक्रीमा राखिएको उक्त नम्बर प्लेट कुनै बहुमूल्य धातुबाट बनेको होइन बरु यसमा रहेका अंकका कारण यस नम्बरका लागि यत्तिको मूल्य दाबी गरिएको हो।
खासमा यस कारको नम्बर एफ- वान रहेको छ जसलाई यसको मालिकले बिक्रीका लागि अनलाइनमा खुल्ला गरेको हो।
हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ की यस नम्बर प्लेटमा त्यस्तो खास के छ त? यो नम्बर ‘फर्मुला वान’को छोटो रूपसँग मिल्ने भएकाले यसको यति विधि मूल्य दाबि गरिएको हो।
ब्रिटिश नागरिक अफजल खानले अनलाइन विज्ञापन पोस्ट गरेर यस बिक्रीको घोषणा गरेका हुन्।
अफजल कारहरू कस्टमाइज गर्ने फर्म ‘खान डिजाइन’ संचालन गर्दछन्। उनले स्वयम् एक वर्ष अगाडी लगभग १७ करोड रुपैयाँ तिरेर यो नम्बर प्लेट किनेका थिए।
विज्ञापनमा नम्बर प्लेटको वास्तविक मूल्य १७६ करोड मात्र रहेको र त्यसमा २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थानान्तरण शुल्क जोडेर यसको मूल्य २६४ करोड पुगेको बताइएको छ।
ब्रिटेनको यातायात कानुन अनुसार गाडीको नम्बर प्लेटमा गाडी मालिकको स्वामित्व हुन्छ र उसले चाहेको खण्डमा यसलाई मात्र पनि बेच्न सक्छ।
एफ-वान नम्बर प्लेट अब प्रतिष्ठाक विषय बनेको छ। यसअघि यो मर्सडीज-म्याक्लेरेन एसएलआर, कस्टम रेंज रोभर और बुगाटी भेरोन जस्ता कारहरूमा लागिसको छ। यदि यो मूल्यमा बेचिने हो भने यो संसार कै सबभन्दा महँगो मूल्यमा बेचिने नम्बर प्लेट हुने छ।
यस अघि दुबईमा १०७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको डी-फाइभ सबैभन्दा महँगोमा बिक्री भएको नम्बर प्लेट मानिन्छ। यसलाई भारतीय मूलका व्यापारी बलविंदर साहनीले खरिद गरेका थिए।
यसका अतिरिक्त सन् २००८ मा ‘१’ नम्बरको नम्बर प्लेट १०५.६ करोडमा बेचिएको थियो।
ट्याग्स: Number Plate